Local News – Media Sharing
ကျောင်းနှင့် အလှမ်းမဝေးလှတဲ့ ထမင်းဆိုင် သေးသေးလေးတစ်ဆိုင်မှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ထမင်းလာမှာစားတယ် ဆိုင်ရှင်နားကပ်ပြီး လေသံတိုးတိုးလေးနှင့် * ဟိုလေ… သမီးကို ထမင်းအလွတ်တစ်ပွဲလောက် ရောင်းပေးလို့ ရလားခင်ဗျ သမီးပိုက်ဆံမလောက်လို့ပါ… ရပါတယ်သမီးရယ် ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ဆိုင်ရှင်အဒေါ် ကြီးက ယောက်ျားရေ ထမင်းအလွတ်တစ်ပွဲလောက် လုပ်ပေးပါဦး အော်…ဟင်းချိုနဲ့ ငါးပိရည်လည်း ထည့်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်… ယောက်ျားဖြစ်သူက ထမင်းအဖြူတစ်ပွဲကိုကောင်မလေးထိုင်နေတဲ့ ခုံမှာသွားချပေးလိုက်တယ်
လာဘ်လာဘ ပိတ်နေသူများအတွက် … လက်တွေ့ချမ်းသာ ရှင်သီဝလိ ဂါထာ ကျွန်ုပ် နှင့် ဆရာတော် အရှင်စန္ဒာသူရိယတို့့ လက်တွေ့အသုံးပြုထားသော ရှင်သီဝလိ ကိုယ်တော်ကြီးအား ပူဇော်ကန်တော့၍ လာဘ်လာဘ ရရှိရန် ဆုတောင်းသော လာဘ်ဖွင့် အစီအရင် တစ်ခုပါ။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ဖယောင်းတိုင် တစ်တိူုင်ကို သနချေ သိဒ္ဓိတင် ဂုဏ်တော် ရွတ်ဖတ်ပြီးပါက
“ကိုကိုရေ… သိပ်ချစ်တဲ့ကိုကိုရေ… ခွေးမတို့ခြံထဲမှာလေ… ခရေတွေ စံပယ်တွေ… ပုန်းညက်နဲ့ ဇီဇဝါတွေ… နှင်းဆီနဲ့ ကံ့ကော်ပန်းတွေ… ယုဇနနဲ့ သနပ်ခါးပန်းတွေ… ပွင့် နေကြတာ မြင်လေတိုင်း… ဝေဒနာလှိုင်းက ရင်ထဲခုန်မပြေ… သက်ငယ်နုစ ပန်းကြိုက် မလေး ဘဝမှာလေ… ကေသာဆံလွှ ထုံးနောက်စမှာ… ကိုကိုကပဲ ပန်ပေးနေ… အခု တော့ ဒီပန်းတွေကို… ဘယ်သူ့ကိုများ
မဈေးကြီးအတွင်းရှိ__ရွှေထိပ်တန်းဖုန်းဆိုင်အားလေးကြိမ်မြောက်__ဖောက်ထွင်းခံရခြင်း.. ၁၁.၆.၂၀၂၀ ဆိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ကိုသန်းထွန်း ပုံမှန်အတိုင်း ဆိုင်လာဖွင့်တော့ သော့တွေရိုက်ဖျက်ထားတဲ့ မိမိဆိုင်ကို မြင်လိုက်ရတော့ ရင်ထဲမီးစနဲ့ထိုးသလို ခံစားလိုက်ရတယ်… တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ် မကဘူး ဒါနဲ့ဆို လေးကြိမ်မြောက်လေ…ဘယ်သူ့အမှားလဲ? ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိလဲ? #လုံခြုံမှုဆိုတာ_ကသာမြို့မဈေးကြီးအတွက်__ဟာသတစ်ပုဒ်လို_ဖြစ်နေပြီဗျာ… အရင် အဖောက်ခံရတိုင်း လူမှုရေးကြည့်ပီး အမှုမဖွင့်ခဲ့ပေမယ့် ခုလိုလေးကြိမ်မြောက် ဖောက်ထွင်းခံရမှုကိုတော့ အမှုဖွင့်တော့မည်ဟု ပိုင်ရှင်ကိုသန်းထွန်းမှ ပြောပြခဲ့ပါတယ်
သူများလယ်ကွက်ထဲက တဲလေးမှာနေရပြီး တစ်ယောက်ထဲ ကယ်သူမဲ့နေတဲ့ ရောဂါသည်တစ်ဦးကို ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ဘုန်းဘုန်း